Iyo Ramangwana reChokwadi Chaicho Mune Yazvino Dzidzo Maitiro
Nhasi uno nyika inoitika shanduko dzakawanda dzinokonzereswa neVR, uye shanduko idzi dzine mikana yese yekugadzirisa zvakakosha muchikoro chemazuva ano.
EaseUS Dudziro Yekudzoreredza, Akanakisa Mahara Ekudzoreredza Wizard 2020!
EaseUS Data Kudzoreredza Wizard yemahara inobatsira iwe nekukurumidza kudzoreredza yakarasika mavhidhiyo, zvinyorwa, mifananidzo uye zvimwe kubva pakadzimwa dhata, yakarasika kana fomati kugoverwa, kubva pakombuta yako, laptop, uye kunyange inobvisika maficha anotyaira nekukurumidza uye nyore.
Maitiro Ekugadzira uye Bvisa Nyowani Windows Vashandisi mukati Windows 10
Heano maitiro ekugadzira uye kugadzirisa Microsoft mushandisi maakaundi, Nzira dzekuzvichengetedza dzinosanganisira matanho ekubvisa / kudzima zvachose maakaundi emushandisi paWindows 10
Maitiro Ekudzoreredza Zvakabviswa Mafaira muWindows 10
Inokurumidza kudzima mamwe akakosha mafaera kana maforodha kubva lapotp? Dont worry apa pane nzira dzakasiyana dzekutora dzadzimwa mafaera mukati Windows 10, 8.1 uye 7!
Yakanakisa 5 Windows 10 Zvidimbu Zvekudzoreredza Zvishandiso 2020
Pano Akanakisa 5 Windows password Kudzoreredza Zvishandiso iwe zvaunogona kushandisa kumisazve kana kugadzirisa iyo yakakanganwa password yeako komputa Laptop inomhanya Windows 10, 8.1 uye 7
Maitiro ekushandura maDVD pane windows 10 yemahara (Gadzirisa DVD isiri kutamba matambudziko)
Heano nhanho nedanho gwaro rekushandura ekare maDVD maunganidzwa kuenda kuDigital mafomati uchishandisa WinX DVD Ripper Platinum yemahara! (gadzirisa DVD isiri kutamba matambudziko)
Maitiro Ekudzoreredza Akadzimwa Mafaira kubva Windows 10, 8.1 uye 7?
Uchisangana nezvinetso nekuwanazve mafaira akadzimwa kubva paWindows laptop yako kana komputa, tora Recoverit Data Kudzoreredza yako-yekumira kugadzirisa data rakadzimwa
Maitiro ekushandura WPS kuita DOC, DOCX kana PDF neinternetconvertfree
Kutsvaga WPS inoshandura kushandura iyo WPS Zvinyorwa kuita doc, docx kana PDF? Pano uchishandisa onlineconvertfree unogona Shandura wps kuita doc uye kurodha pasi nyore 3 setps
Backup uye Kudzoreredza Software yeWindows 10
Pane nzira dzinoverengeka dzekutsigira PC yako Pano tanyora dzakasiyana mhando dzeBackup mukati Windows 10
5 Zvikonzero Zvako Windows 10 Computer iri Kumhanya Zvishoma
Wacherechedza here Windows 10 Computer inomhanya zvishoma? Heano zvikonzero zvishanu nei izvi zvingave zviri kuitika uye maitiro ekugadzirisa windows 10 yekuita zvirinani
iBeesoft Data Kudzoreredza Uye Mahara rezinesi rinokosha $ 49.95
iBeesoft Data Kudzoreredza Yakachengeteka uye ine simba kudzoreredza software, inobatsira kudzoreredza ako akadzimwa, akaumbika kana akarasika mafaera kubva kumakomputa, ekunze HDD, SSD, USB, memory kadhi, dijitari kamera, nezvimwe.
Cheat Sheet yekunzwisisa VPN Protocol
Zvirongwa zveVPN zvakakosha zvikuru uye iwe unofanirwa kuziva nezvazvo. Nekuda kwako, takagadzira iyi VPN Protocol Cheat Sheet.
Nzira dze5 dzekuvanza Nzvimbo yako Pamhepo (Gara Usinga zivikanwe)!
Kuvanza nzvimbo yako pamhepo kunonyanya kukosha kupfuura vamwe vako ungafunge. Nekudaro, kukubatsira iwe kuvanza nzvimbo yako pamhepo, heino nzira shanu dzakanakisa dzekuita nezvazvo.
Chigadzirwa Ongororo - Kugadziriswa kweStellar Kwekuwana
Iyo A kuna Z Zano kune Dhirairi Dhirairi paWindows 10, 8.1 uye 7
Chii chinonzi Dhiraivha mutyairi, Zvinorevei Maneja wedhivha uye zvinoshanda sei? Pano mudziyo maneja zvinoreva, tsananguro & tsananguro!
Maitiro ekutora Backup ye windows 10 OS mulaptop uye Desktop PC
Hedzino mbiri nzira dzekuchengetedza Windows 10 OS kubva kuvaka mukati Gadzira Windows 10 Sisitimu Yemufananidzo maficha uye kushandisa yechitatu bato utility CloneGo iyo inogonesa vashandisi backup Windows system kupatsanura seyakaomeswa faira.
Chengetedza Bhizinesi Rako Rakachengeteka Neaya gumi eCyber ​​Security Matipi
Pano tave takapeta gumi zvakapusa Internet kana Cyber ​​Security Matipi 2019 yekuvandudza yako sosi yekuchengetedzeka mamiriro Chengetedza Bhizinesi Rako Rakachengeteka kubva kuvabiridzi, spammers uye zvimwe.
Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezve PPTP VPN
PPTP VPN ndeimwe yeakajairika uye ari nyore kuendesa mhando dzeVPN. Ngationei kuti inoita sei zvakanaka kana ichienzaniswa nevamwe.
3 Nzira dzekunyatso pukuta Hard Dhiraivhu paWindows 10 PC
Kana iwe uri Kutengesa kana zvachose uchipa iyo Computer yako, Ita shuwa yekuchengetedza yako inonzwisisika Dhata. Pano isu takanyora nzira dzakasiyana dzekunyatso pukuta yako Computer Hard Drive